Threesome netumababie tumaSouth Africans kuno Joni
Ndaigara muJoburg apa ndainge ndava ne 6 months ndatanga kushanda. Mari ndainge ndainayo kare zvekuti pandikatanga kushanda ku IT department ndichishandira FNB ndakatenga kamota kangu kekuti ndiwane chekufambisa ka Audi A4.
Mumwe musi I was assigned kuyenda to fix some problem ku Centurion bank ndokubva ndayenda, ndichisvika I was greeted na Nonhlanhla, kababe kainge kakanaka ikako. Aishanda sa bank teller ndokubva ndapinda since ndainge ndisina access code but after ndapinda I fixed problem yavo and ndokubva ndadzokera apa ndainge ndapihwa fone number already. Takatanga kuita chat naye for days tichitaura hedu about life until one day I invited her kuti tiyende for dinner and akandipa number yepamba pake ndokubva ndayenda only to be surprised.
Ndakasvika ndikanoka door ndokubva ndavhurirwa Nonhlanhla apa ainge akapfeka kadress keblue kasvika pamusoro pemabvi apa, kainge kari kamini kaimisa mboro nekungomutarisa. Ndakabva ndanzi dinner is almost ready ndikabva ndavhunduka ndikati I thought we are not going out kurikutonhora saka we decided kukubikira dinner pano.
Another shock ndokubva ndati “we” I thought unogara wega zvikanzi no ndinogara na Ketty my friend anoshanda ku Standard Bank tinogara tese. Ndakapinda mumba ndikagara pasi ndokuona ka red dress kachibudikira mukitchen apa kainge kari kapfupi just like kaNonhlanhla. Ndakagara pasi ndikatanga kuwona TV waiting for them kuti vauye nechikafu, minutes later ndakaona vanhu vachiuya nechikafu ha iwe masasi eharare chikafu chainge chichinhuwirira kuita kunge ndayenda kurestaurant chaiko.
Takadya zvinhu zvese ipapo ndokubva tagara mudinning imomo tichiwona TV until takushaya nyaya ndipo pakabva paita scene yevanhu vaikisana ndipo pandakawona vasikana vachitarisana ndikashaya kuti chii chainge chakuitika. Nonhlanhla ndiye akatanga kuuya pandiri ndokubva ati sha chando ichi what do you think, ndikati what did you have in mind. Zvikanzi me and my friend tangatichida kuti tisvirane if you don’t have a problem nazvo. Ndakafunga kuti ndiri kurota ipapo ndikati ah ah ah ndiyani angarambe mukana wekukwira vasikana two vakanaka kudai. Nonhlanhla ndainge ndamuda zvekuti ndaifunga kuti pamwe ndichaita girlfriend asi seems like ndainge ndichawana mukana wekungosvirana chete and I had no problem with that.
Ndakatanga kubatwa everywhere varume, mboro yangu ikabva yakamira zvekuwoneka pamberi apa ndipo pakauya Ketty ndokubva ayibvisa mubhurungwa ndokuiyisa mumuromo. Kudziya kwaiyita mate ate kwakaita kuti nditange kunzwa kakudziya asi musi uyu kwaitonhora zvisingaite ndokubva ndavati tadii tayenda kunoita izvi somewhere panodziya. Takayenda kubedroom kwaKetty hanzi ndiye aiva ne Queen bed, takasviko pinda mumablankets apa imba yacho yainge ichidzika kare mainge makabatidza rino zi Logik heater.
Mumwe ainge ari kumusoro achindikisa kisa mumwe achiyamwa mboro inini handichazive kuti ndaibata matinji ani. Ndakazonzwa mboro yagarirwa ndichikoirwa zvebasa apa hapana aitaura vainge vandivhara maziso hanzi hatisi kuda kuti uite compare kuti anonaka pakadi pedu ndiyani we want you to keep it to yourself kuitira next time.
Ndakakoirwa ndikanzwa vese vachitunda ndipo pandikazotundawo, pese apa handina kumbonzwa kuti ndainge ndapfekedzwa kondom, durex ultra thin zvekuti ndainge ndisinganzwe kuti ndakapfeka anything. Pandakatunda ipapo ndakanzwa kudziya muviri wese ndokubva tangorara tikazomuka manheru tikasvirana futi then rimwe round makuseni seni.Ndakazofara ndakunzi if you want unopota uchiuya for a free sviro ndipo pandikayenda kumba kwangu. Ndakapota ndichiwona vese and pese patiiyenda kusvirana kwacho was always different.
Updated: February 22, 2018 — 9:06 pm
Kukwira Cherol kuGame Park Ndobva Tadzingirirwa NeMapurisa
Kusvira Officemate Mai Maka Ndavawana Vachibonyora
Madzimai kusvirwa nemukomana wekuZesa